Orinasa mizara divay vita amin'ny rindrina - Mpanamboatra mpizara mpamatsy rindrina any Sina
Mombamomba ny orinasa sy ny kolontsain'ny orinasa
Vy vy vy
Mpizara vy sy vy metaly
Mpizara manda vy
Fizarana fifandraisana amin'ny rindrina fitaratra
Fitotoana kofehy vy ary alatsaho
Fametahana vy tsy misy fangarony
Aluminium & varahina vy vy faritra
Sela vy metaly
Tranobe Microsoft Microsoft Koton
Toeram-piantsonanan'i Railway any avaratra
Transit Rapid Transit Guangzhou-Zhuhai Intercity
Tetikasa 100 Keilor Road, Essendon, VIC 3041, tetikasa Melbourne
Fivarotana lehibe LV Beijing
Sl-8014 Laser Cut Privacy Screens Stainless Steel haingon-trano metaly lamba zaridaina zaridaina haingon-trano metaly metaly efijery
Ny mpizara vy dia novina tamin'ny fomba roa samy hafa. Ny iray dia ny fampiasana fantsom-by vy, ny fomba hafa dia ny fampiasana lovia vy hanaovana fanapahana laser. Rehefa misafidy fantsom-by ianao, dia mila dinihintsika koa ny hateviny.
Raha manana toeram-ponenana lehibe na misokatra ianao, ny mpizara efitra - fantatra koa amin'ny hoe fizara na fakan-tsary Shoji - dia fomba tsara sy mora hanarahana na hanavahana fizarana 2 ao anatin'io toerana io na hanomezana teboka mifantoka tsara tarehy ao anaty efitra. Raha tsy izany, ny mpizara efitra dia azo ampiasaina hanomezana faritra manokana amin'ny toerana malalaka hafa, hanakatona faritra tsy mendrika, na hiaro afo misokatra. Tena mahabe zavatra, ny mpizara efitra dia manome vahaolana mora amin'ny olan'ny ankohonana maro dia maro, ary toa matavy izy ireo
SL-8012 rindrina fizarazaran-tsarimihetsika vita sokitra vita amin'ny vy maoderina.
Izahay dia nitily momba izay inoanay fa ny sasany amin'ireo mpizara efitra tsara kalitao sy tsara indrindra any. Nahita mpampisaraka vy / takela-by izahay; Mpampizara efitrano haingo Shōji, mpizara fizarana ala vita amin'ny hazo nentim-paharazana, mpizara efitra ho an'ny sary miendrika sary miendrika haingon-trano. Ny lisitray dia hanome anao aingam-panahy ho an'ny karazana trano.
Laser Cut Privacy Screens Stainless vy haingon-trano vy rindrina Mpizara fizaran-tarehy haingon-trano
Ity mpizara rindrina vy ity dia namboarina tamin'ny laser notapatapahina mba ho faran'izay tsara tarehy modely, tena tsara sy mahafinaritra ary tantaram-pitiavana. ary avy eo nolokoana loko miloko raozy i PVD, azo antoka fa sanganasa kanto tsara ao an-tranonao izy io.
Efitra fandraisam-bahiny efitrano fandraisam-bahiny efitrano fandraisam-bahiny efijery fizarazaran-doko vy vy fizarazaran'ireo efijery haingon-trano Laser Cut lamba efijery
Ity mpizara rindrina vy ity dia zarain'ny fantsom-boaloboka metaly hafa, ary avy eo nofaranana borosy sy miloko matte, tsotra ary fohy.
Miaraka amin'ny haitao mihombo mahery.
Raha tsy izany, ity mpizara efitrano ity dia azo ampiasaina hanomezana faritra manokana amin'ny toerana malalaka hafa, hanidy faritra tsy mendrika na hiaro faritra malalaka. Maromaro be izy io, ny mpizara efitra dia manome vahaolana mora amin'ny olan'ny ankohonana maro, ary ho an'ny haingon-trano!
Mpizara fizahana vy tsy voatanisa maoderina
* Fivondronana mora sy endrika kanto.
* Volavola modely misy.
* Mangarahara tsara, marefo ary henjana.
Efitra fizarana vy haingon-trano tontonana haingon-trano tsy manam-paharoa lamaody efitra fandraisam-bahiny efitra fandraisam-bahiny efitra zarazaraina
Ity mpizara rindrina vy ity dia zarain'ny fantsom-by, ary avy eo vita tamin'ny loko plating ion Vacuum, miaraka amina endrika endrika geometrika kanto, fohy sy mirindra.
Izy io dia malaza amin'ny efitrano fandraisam-bahiny maoderina na trano fandraisam-bahiny, sns.
Ny kaonferansa manerantany vy sy ...
Ny foara faha-Canton faha-119 an'ny Hardware JKL
Famaritana ny vy tsy misy fangarony ira ...
Fahasamihafana eo amin'ny fitaovan'ny SS304 sy SS316
Ny foara Canton faha-118 an'ny Hardware JKL
Address: No.1 Tangdu Road, Songbotang, Changping, Dongguan, Sina
Fametahana Handrail mitsangana, Tohatra Handrail Bracket, Handrail vy tsy miova, Handrails, Handrail amin'ny vy mahery, Takelaka fototra Handrail,